ဓာတ်ပုံ - Anadolu Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့ နေဇာမူဒင် (Nizamuddin) အရပ်က သဗ္ဗလိဂ် ဂျမာ့အ်သ် ရုံးချုပ်မှာရှိတဲ့ လူပေါင်း ၂၃၀၀ ကျော်ကို ကိုဗစ်နိုင်တင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အစိုးရက ဘေးကင်းရာ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ဖို့ ငါးရက်တိတိကြာခဲ့တယ်။
သဗ္ဗလိဂ် ဆိုတာ အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်ပွားရေးကို လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒီတွေ၊ ရှေးဟောင်းအယူဝါဒ ပြန်လည်ရှင်သန်အောင် ကြိုးပမ်းနေသူတွေ ဖြစ်ပြီး ဒေလီက ရုံးချုပ်မှာ နှစ်စဉ်တွေ့ဆုံပွဲတွေ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပချိန်ဟာ ကိုဗစ်နိုင်တင်းဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒီတွေ့ဆုံမှုကို ကမ္ဘာတဝန်းက ယုံကြည်သူ (နောက်လိုက်၊ အဖွဲ့ဝင်) တွေ လာရောက် စုဝေးလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း ဒီပွဲကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ရရှိတဲ့သတင်းတွေအရ လူ ၆၀ နဲ့ ၇၀ ကြားရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ တချို့ကဆိုရင် လူပေါင်း ၆၃ ယောက်တိတိ ရှိတယ်လို့ အတိအကျဆိုပါတယ်။ ဒီလူတွေ ခု မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက်ကြပြီလား၊ အိန္ဒိယမှာပဲလားဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိကြပါဘူး။
ဒီကိစ္စက ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ....?
လက်ရှိအချိန်ထိ ကိုဗစ်ကြောင့် အိန္ဒိယမှာ လူ ၁၀၀ ကျော် သေဆုံးပြီး ၄၂၀၀ ကျော် ပိုးတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ပိုးတွေ့တဲ့အထဲမှာ သဗ္ဗလိဂ် အဖွဲ့ဝင် ၄၀၀ ကျော်ပါဝင်နေပြီး ၁၉ ဦးဟာ အသက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဟိန္ဒူ အမျိုးသားရေးသမား ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူတွေဖြစ်တဲ့ သဗ္ဗလိဂ် ကို နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လိုမှုနဲ့ သာသာထိုးထိုး ပြောဆိုမှုတွေ တွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံထဲမှာ ပိုး ပျံ့နှံမှုများလာတာဟာ ကမ္ဘာအနှံ့က ရောက်လာတဲ့ သဗ္ဗလိဂ် ယုံကြည်သူတွေကြောင့် ဆိုပြီးတော့တောင် စွပ်စွဲပြောဆိုထားပါတယ်။
အိန္ဒိယက ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေး ပြင်းထန်တဲ့ သတင်းဌာနတချို့ဆိုရင် Nizamuddin’s Tablighi Jamaat has doubled cases in India (နေဇာမူဒင်အရပ်က သဗ္ဗလိဂ် ဂျမာ့အ်သ် ကြောင့် ပိုးတွေ့ရှိမှု နှစ်ဆတိုး) ဆိုပြီးတော့တောင် ရေးကြတယ်။
သဗ္ဗလိဂ် ဂျမာ့အ်သ် တွေ့ဆုံမှုဟာ မတ် ၁၃ ကနေ ၁၅ ထိ သုံးရက်ကြာခဲ့ပြီး နိုင်ငံအနှံ့က လူထောင်ချီ လာရောက် စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ အိန္ဒိယမှာ စတင်ပြီး lockdown လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်ပါပဲ။
ဒေလီက ဘာသာရေးပြင်းထန်သူ မွတ်စလင် ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကတော့ “ဒီလိုဖြစ်မယ်မှန်းသိရင် အစကတည်းက ခွင့်မပြုခဲ့သင့်ဘူး” ဆိုပြီး ဒီ လူထောင်ချီပွဲကြီးကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့မှုအတွက် အစိုးရကို တုံ့ပြန်ဝေဖန်ပါတယ်။
မောင်လာနာ ဆာ့ ခန်ဒ်လာဝီ (Maulana Saad Kandhlawi) ဆိုတာ သဗ္ဗလိဂ် ဂျမာ့အ်သ်ရဲ့ လက်ရှိ အကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ပါ။ အသက် ၅၄ နှစ်ရှိပြီး သဗ္ဗလိဂ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူရဲ့ မြေး တော်စပ်ပါတယ်။
ခုတော့ သူ့ကို အစိုးရက မေးခွန်း ၂၆ ခုမေးထားပြီး ဆာ့ ခန်ဒ်လာဝီ ကတော့ သူ့အကြောင်းအသေးစိတ်နဲ့ သူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို “ခုလို တနိုင်ငံလုံး lockdown လုပ်ထားချိန်မှာ မပေးနိုင်ပါဘူး” လို့ အကြောင်းပြထားပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း lockdown ကာလထဲ quarantine လုပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သဘောက လက်ရှိ သဗ္ဗလိဂ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ နောက် ဘယ်နိုင်ငံက လူဘယ်နှစ်ယောက် ရောက်လာခဲ့တာတွေကို အစိုးရက တရားဝင်တောင်းဆိုတာကို ဆာ့ ခန်ဒ်လာဝီက ပေးဖို့ ငြင်းဆန်လိုက်တာပါ။ အိန္ဒိယ ထောက်လှမ်းရေးကတော့ ဒီကိစ္စကို စုံစမ်းနေတယ်လို့ မီဒီယာတွေကို ပြောထားပါတယ်။
ခုလို ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ဘီဘီစီအပါအဝင်၊ အိန္ဒိယ အီကော်နောမစ်၊ တူရကီက အန်နာဒိုလူ အေဂျင်စီ စတဲ့ မီဒီယာတွေက ဆောင်းပါးတွေ ရေးပြီး တောက်လျှောက် ဖော်ပြနေတာလည်း တွေ့ရတယ်။
လက်ရှိ ရထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရ ဒီ သဗ္ဗလိဂ်ပွဲမှာ တက်ရောက်ခဲ့သူတွေထဲ သံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်လူနာတွေ ရှိတယ်၊ ပိုးတွေ့ထားတဲ့လူတွေပါတယ်၊ ဒီထဲကပဲ သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေလည်း ရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ ဒီပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက သဗ္ဗလိဂ် ယုံကြည်သူတွေဆီမှာရော...?
မြန်မာ အစိုးရရဲ့ လက်ရှိအချိန်ထိ ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲ စောင့်ကြည့်ခံရသူစာရင်းမှာ အိန္ဒိယက ပြန်လာတဲ့လူ တယောက်မှ မပါသေးပါဘူး။ ဆိုတော့ ဒီလူ ၆၀ ကျော် ဘယ်ကိုရောက်နေကြလဲ...?
ခုနောက်ပိုင်း အစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးတွေ့ရှိမှု လူနာသစ်တွေမှာ "အိန္ဒိယ ခရီးသွားရာဇဝင်ရှိသူ" တွေ တွေ့ရမှာပါ။ တော်တော်များများက ဒီလူတွေဟာ ဘယ်သူတွေဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် "အိန္ဒိယပြန်တွေ" ပဲဖြစ်နေကြလဲဆိုတာ စနိုးစနောင့် ဖြစ်နေကြမှာပါ။
ဒီကာလမှာ အိန္ဒိယပြန် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ (၁) စာသွားသင်တဲ့ မန္တလေးက ရာချီတဲ့ သံဃာတွေ (၂) သဗ္ဗလိဂ် ဂျမာ့အ်သ်တွေ့ဆုံပွဲကို သွားကြတဲ့ လူ ၇၀ ကျော်။
စာသွားသင်တဲ့ သံဃာတွေကို သီတဂူဆရာတော်ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ပြန်ခေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း ကွာရန်တင်းထားခဲ့တာကနေ ပိုးမတွေ့ရလို့ သိထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပိုးထပ်တွေ့တဲ့လူနာတွေထဲမှာ သံဃာဦးရေပါတာ ဒီနေ့ထိ မတွေ့ရသေးတဲ့အတွက် လက်ရှိ ပိုးတွေ့နေတဲ့ အိန္ဒိယပြန်တွေထဲမှာ စာသင်သံဃာတွေ မပါသေးပါဘူး။
ဆိုတော့ နံပါတ် (၂) သဗ္ဗလိဂ် ဂျမာ့အ်သ် တွေ့ဆုံပွဲ​သွားသူတွေပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဧပြီ ၇၊ ကျနော်အပေါ်က စာကို ရေးတုန်းက တော်တော်များများက ဝေဖန်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ တချို့ကလည်း အိန္ဒိယကို ရောက်နေတဲ့ သဗ္ဗလိဂ် ဂျမာ့အ်သ်ပွဲသွားတက်သူတွေဟာ စနစ်တကျ ကွာရန်တင်းနေကြောင်း လာပြောကြသူတွေ ရှိပါတယ်။
တချို့ကတော့လည်း သူတို့က အိန္ဒိယအစိုးရကို အသိမခံဘဲ ပုန်းကွယ်ပြီး ကွာရန်တင်းနေကြတယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ဟင်ဒူစတန်တိုင်းမ် က တက်လာတဲ့သတင်းတပုဒ်ကတော့ မေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါက "မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့လုပ်နေတဲ့ သဗ္ဗလိဂ် ဂျမာ့အ်သ်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူ ၂၂ ဦး ဂါယာလေဆိပ်မှာ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်" ဆိုတာပါပဲ။
သဗ္ဗလိဂ် ဂျမာ့အ်သ်ပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သူတွေဟာ အိန္ဒိယမှာ Lockdown ချထားချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ ကွာရန်တင်းနေကြပြီး အစိုးရက မသိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ခုတော့ ဒီပွဲတက်ပြီး ပြန်လာကြသူတွေထဲကပဲ ပိုးတွေ့ရှိမှုတွေ မြင့်တက်လာနေတာပါပဲ။
Previous Post နောက် နှစ် ၂၀ လောက်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ
Next Post 'ဖက်' ကြပါ